Fashion Style ဘယ်နှစ်မျိုးရှိတယ်လို့ထင်သလဲ? အပိုင်း(၁) – YANGON STYLE
Fashion Style ဘယ်နှစ်မျိုးရှိတယ်လို့ထင်သလဲ? အပိုင်း(၁)
Fashion Style အမျိုးမျိုးရှိတဲ့ထဲကမှ ဝတ်ဆင်မှုအများဆုံး Fashion Style ၃ မျိုးကို အရင်ဆုံးပြောပြပါမယ်။
ခေတ်မှီတဲ့ ဖက်ရှင် စတိုင်တွေကို ဦးဆောင်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပြီးချုပ်လုပ်ထားတဲ့ ဒီဇိုင်းတွေကို ဝတ်ဆင်တဲ့ စတိုင်ပေါ့။ ကာလာပိုင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင် အငြိမ်ဘက်သွားတဲ့ ကာလာတွေများတယ်။
သူ့စတိုင်လေးကတော့ အနုပညာဆန်ပြီး နားလည်ရခက်တဲ့ စတိုင်မျိုးလို့ပြောလို့ရတယ်။ ရိုးရာအဆင်လေးတွေကို တုပပြီးချုပ်ထားတဲ့ ပုံစံတွေပေါ့။ အရောင်အသွေးစုံစုံလင်လင်နဲ့ Pattern ဆန်းဆန်းပြားပြားတွေကို အနုစိတ်သုံးထားတာ တွေ့ရတယ်။ အဲ့ဒီ စတိုင်က gypsy နဲ့ hippie လူမျိုးတွေကနေ ဆင်းသက်လာတဲ့ စတိုင်ဖြစ်တယ်။
ဒီ စတိုင်ကတော့ နည်းနည်းခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲတဲ့ ခေတ်ဟောင်း ဖက်ရှင်စတိုင် တစ်မျိုးပေါ့။ ၁၉၇၀ ၁၉၈၀ ခုနှစ်က မိန်းကလေးငယ်လေးတွေ ဝတ်ဆင်တဲ့ စတိုင်လို့ပြောလို့ရတယ်။ သူ့စတိုင်ကရိုးရှင်းတယ် ရှုပ်ထွေးနေအောင် ဝတ်မထားဘူး။